အစ္စတန်ဘူလ်ညက Metro ကြေးဇယား - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[20 / 09 / 2019] Konya YHT ဘူတာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းနယူး Service ကိုဖွင့်လှစ်	42 Konya
[20 / 09 / 2019] Çerkezköy မီးရထားလိုင်း၏Kapıkuleဖောင်ဒေးရှင်းမှချွတ်ကိုစလှေတျ	22 Edirne
[20 / 09 / 2019] Kocaeli Kuruçeşmeဓါတ်ရထားလိုင်းရထားလမ်းကွန်ကရစ်ပြိုကွဲနေကြသည်	41 Kocaeli
[20 / 09 / 2019] သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာပြောင်းလဲပွီ!	06 တူရကီ
[20 / 09 / 2019] နယူး TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan ရရှိနိုင်ခဲ့	06 တူရကီ
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်ညက Metro လေဆိပ်စွပ်စွဲချက်
31 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
IMM İmamoğluသမ္မတ, "ဤမြို့သည် 24 နာရီနေထိုင်သော" ကအစ္စတန်ဘူလ် 24 အချိန်ခရီးသွား "ကာလ၌ '' အစ္စတန်ဘူလ်၏နေထိုင်သူများမှသတငျးကောငျးအပ်ပေးတော်မူ၏ဟုပြောဆိုလျက်, သြဂုတ်လ 30 ညဥ့်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေ့စတင်ခဲ့တယ်။ အသစ်ကလျှောက်လွှာနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်, တနင်္ဂနွေကမ်ဘာပျေါမှာရှစ်လိုမြို့ကြီးပြထိုညဉ့်မြေအောက်ရထားဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယခုမွို့၌6အများဆုံးအသုံးပြုမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုတရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်, ဘာသာရေးအားလပ်ရက်များနှင့်တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းအပါအဝင်အစ္စတန်ဘူလ် 24 နာရီကို run ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးဌာန၌အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အစေခံရန် Started, ဒီသစ်ကိုလျှောက်လွှာမူဘောင်ညဥ့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများပါဝင်သည်:
M1 Yenikapi-Ataturk လေဆိပ်က Metro လိုင်း,
M1B Yenikapi-Kirazli မီထရိုလိုင်း,
M2 Yenikapı-Taksim မီထရိုလိုင်းHacıosman,
M6 Levent Bogazici တက္ကသိုလ် / Hisarüstüမီထရိုလိုင်း။
IETT METROBUS, သမာဓိနှင့်အညီ
Metro လိုင်းညဉ့်ကိုအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါအဲဒီမှာရှစ် IETT လိုင်းဖြစ်နှင့် Metrobus နှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်မြို့နှစ်ဘက်အကြားလုပ်ရမည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခရီးအတှကျအရေးပါသောအခွင့်အလမ်းပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ အလေ့အကျင့်အားဖြင့်, Tuzla Büyükçekmece, ညအချိန်တွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအကြိုးကွောငျးအလွန်လ၌လူနေထူထပ်သောခရိုင်အကြားတည်ရှိသည်။
နေ့ချင်းညချင်းရှစ်မှတဆင့်လိုင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် 24 IETT သည့်မက်ထရိုနှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ဘက်ပေါင်းစုံလိုင်းများပါဝင်သည်:
34G Beylikdüzü-Sogutlucesme (Metrobüs)
RH အ 11 Sultanbeyli - Uskudar
ရေတပ်အကယ်ဒမီ 130 - Kadikoy
15F Beykoz - kadıköyxnumxg Sariyer - Taksim
E-10 Sabiha Gokcen လေဆိပ် / Kurtköy - Kadikoy
E-3 Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် - မီထရို xnumx.levent
အဆိုပါစနေနေ့ညဉ့်၌ညဥ့်မြေအောက်ရထားကုမ္ပဏီ, သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့တနင်္ဂနွေ, 20 မိချိတ်ဆက်တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ညမီ။ ဒါဟာအချိန်ကြားကာလမှာနေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။ ဒီစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူ; 66 ရှေ့တော်၌ထိုတစ်နေ့တာ၏ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီ, 1 နေ့ရုံးပိတ်ရက်နှင့်အတူတနင်္ဂနွေညဥ့်အချိန်ကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်၏ 42 နာရီတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ထိုနေ့၏က start ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတနင်္ဂနွေနှင့်အများပြည်သူအားလပ်ရက်ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်း, ထိုနာရီ 00: 00 ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအဆုံး 23 ၏အဆုံးအဖြစ်စတင်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းမှာ about: 59 အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ: ကြောင့်တနင်္ဂနွေသို့ရောက်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသြဂုတ်လ 30 24 နာရီအပေါ်အောင်ပွဲခံနေ့;
•သြဂုတ် 29 06 ၏နံနက်တွင်: 00 30 သြဂုတ်လနင်္လာမှသောကြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 00 ၏အစအဦး: 00 ညဉ့်အဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်,
•သြဂုတ် 30 06 ၏နံနက်: 00 တနင်္ဂနွေနေတဲ့အမည်ခံအခွန်နှင့်အတူလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်,
•သြဂုတ် 31 00: 00-06: 00 ကြားညဥ့်အချိန်ဇယား, 06: 00 နှင့် 1 စက်တင်ဘာလ 00: တနင်္ဂနွေနှုန်းထားများထံမှ 00 လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်,
• 1 စက်တင်ဘာလ 00: 00-06: 00 ကြားညဥ့်အချိန်ဇယား, 06: 00-00: တနင်္ဂနွေနှုန်းထားများအတွက် 00 လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်,
ဒါကြောင့်ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 29 06: တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 00 မှ 1 00: 00 90 မပြတ်မတောက်မက်ထရိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နာရီအကြားပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဇန်နဝါရီ 1 2020 တနင်္ဂနွေသည်အထိဒီဇိုင်းနှင့် infographics ၏စကားရပ်နှင့်အမြင်အာရုံအများပြည်သူအားလပ်ရက်အပေါ်ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Metro ညစွဲချက်
ကို Double-ညဥ့်မြေအောက်ရထားအခကြေးငွေအချိန်ဇယားထဲမှာစတင်ပါလိမ့်မည်သည့်သြဂုတ်လ 30 ၏အဖြစ်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ ညဥ့်အချိန်အကောက်အခွန်စတင်ခြင်း၏ 00 နာရီ: 30 double Cross ထဲကသက်ဆိုင်ရာကဒ်အပါအဝင်အမည်ခံအခွန်နှင့်အတူကဒ်စာဖတ်သူ turnstile အခကြေးငွေကိုရှောက်သွားစေသောအခါတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ systems နံနက် 05: 30 ညဥ့်မှာအချိန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနှင့်အတူတရားစွဲဆိုပုံမှန်နှုန်းထားများမှပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
အခကြေးငွေနာရီ Antalya ဓါတ်ရထား, လမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်ဇယား 2019 19 / 08 / 2019 အဆိုပါစည်ပင်သာယာန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ယူ 2010 1 ခုနှစ်တွင် Antalya တဲ့ Metropolitan ။ ဇာတ်စင်အလင်းရထားလိုင်းကို, စတင်သည်နှင့် Fatih ခရိုင် Square ကိုဘူတာရုံထဲမှာအဆုံးသတ်ထားသည်။ 11 ကီလိုမီတာအကြောင်းကိုလိုင်း။ ရှည်လျားသော 16 စုစုပေါင်းခရီးသည်ဘူတာရုံရှိပါသည်။ လုံခြုံစွာလူကူးလူသွားလူအဆင့်ကိုဖြတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အားလုံးဘူတာ၏ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ 2016 တည်ဆဲလိုင်းနှင့်လေဆိပ်ကုန်စည်ပြပွဲရထားလိုင်းအတွက် xnumx.etap ဖွင့်လှစ်သဘောပေါက်န်ဆောင်မှုများကိုစတင်ချိတ်ဆက်။ အပိုဆောင်း2ဘူတာရုံရထားလိုင်းများ2ကီလိုမီတာအကြောင်းကိုကိုဖန်ဆင်းပြီးပိုခဲ့ကြသည်နှင့်အတူ xnumx.etap ရထားစနစ်လိုင်း '' အထဲကအစာကိုစား, ဘူတာ၏နံပါတ် 15 တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 30 ။ ဇာတ်စင်ရထားစနစ် ...
Marmaray ခရီးသွားလက်မှတ်စနစ်, ထို Marmaray Marmaray ဘူတာနှင့်လေဆိပ်စွပ်စွဲချက် 14 / 03 / 2019 တူရကီအတွက် Marmaray, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Kocaeli မြို့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ခရီးသည်ရထားလမ်းစနစ်ဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားဟာ Marmaray ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအောက်မှာနှင့်ဥရောပဘက်မှာလုပ်ရမည် Halkalı Gebze အတူ Anatolian ဘက်အကြားတည်ရှိသောနှင့် Marmara ပင်လယ်ပြင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်တလျှောက်တိုးချဲ့တည်ဆဲဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများ၏ခေတ်မီမှု။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် xnumx't စတင်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်းဧပြီလ 2004 အပေါ်ပြီးစီးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်သမိုင်းလေ့လာမှုများနှင့်စီမံကိန်းများကိုစဉ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာမှုကြောင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားရန် 2009 အောက်တိုဘာလ xnumx't ၏ပထမအဆင့်တွင်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ။ အလုပ်၏ဒုတိယအဆင့်တွင်မတ်လ 29 2013 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ Project မှစွဲလန်းနှစ်သက်ပြွန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (12 ...
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နယူးကြေးဇယားဖျေါပွခကျြ 28 / 08 / 2019 ကျောင်းစာအုပ်န်ထမ်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, အငှားယာဉ်များ, minibuses ဒေသခံကူးတို့ဖွငျ့တရားစွဲဆိုအသစ်သောအခွန်နှင့်အတူတက္ကစီစာချုပ်သက်တမ်းကုန်။ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေအတွက်Xnumx'lükရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာသည်ကျောင်းအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများဖန်ဆင်းတော်မူပြီနေစဉ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ဖြတ်ပြီး operating ယနေ့ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးတွင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME), တက္ကစီ, မီနီဘတ်စ်, တက္ကစီ minibuses, ကျောင်းများနှင့်ဒေသခံကူးတို့ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝန်ထမ်းများကတရားစွဲဆိုအသစ်သောအခွန်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ အခကြေးငွေအချိန်ဇယား; နိုင်ငံသားများ၏တန်ဖိုးလျော့ကုန်ကျစရိတ်အတွက်တိုးနှင့်အတူငွေဖောင်းပွမှုကိန်းဂဏန်းများ, အကောင့်လောင်စာစရိတ်နှင့်ဝင်ငွေအဆင့်အတန်းသို့ယူကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ UKOME ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်အခွန်အဆိုအရ; လက်ရှိအခကြေးငွေအတွက်တက္ကစီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စ ...
Metro အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ညတောင်တက်စတင်! .. ကောင်းပြီလုံခြုံရေးပေးခံရစေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? Register လုပ်နည်း .. ညမြေအောက်အခကြေးငွေ? .. 29 / 08 / 2019 စိတ်ကိုတစ်ဦးမြို့ပြလူနေမှု 24 နာရီ "Lines ပြုလုပ်ခြင်း Metro ညခရီးများထွက်ခြင်း" ၏အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏လိုအပ်ချက်များကိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်တနင်္ဂနွေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်အားဖြင့် 24 မြေအောက်အများပြည်သူအားလပ်ရက်၏နာရီပေးတောင်းဆိုနေပြီ။ 30 အစ္စတန်ဘူလ်က Metro စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူသြဂုတ်လအတွင်းစတင်မည်သည့်လျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်, သကဲ့သို့၎င်း, M1 Yenikapi-Ataturk လေဆိပ်, M1B Yenikapi-Kirazli, M2 Yenikapi-Hacıosman M4 Kadikoy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Cekmekoy နှင့် M6 Levent Bosphorus တက္ကသိုလ်။ / တနင်္ဂနွေနှင့်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များအပေါ်Hisarüstüမြေအောက်ရထားလိုင်းများစစ်ဆင်ရေး၏ 24 နာရီလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ညဥ့်မြေအောက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း ညဥ့်မြေအောက်ရထားကုမ္ပဏီ, သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ချိတ်ဆက်စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေညတွေမှာအများပြည်သူအားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ် ...
နာရီနှစ်သစ်ကူးအကြိုအတွက်တူရကီမြေအောက်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား 30 / 12 / 2014 နှစ်သစ်ကူးအကြိုအပေါ်တူရကီမြေအောက်ရထားပြီးတော့ဘတ်စ်ကားနာရီ: ညဉ့်အဘို့အပိုဆောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်စည်းရုံးရေးအားဖြင့်အတ္တခရစ္စမတ်၏တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှောင်းပိုင်းသည်အထိအစေခံပါလိမ့်မယ်။ တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်သစ်နှစ်အတွက်တွေ့ဆုံရန်, အကောင့်သို့တာBaşkentlilerသူတို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခြင်းဖြင့်ငါ၏အမှုအတွက်အချိန်တိုးချဲ့ဖို့နှောင်းပိုင်းအထိသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လိုအပ်ပေမည်။ 31 ဇန်နဝါရီလအတ္တဘတ်စ်ကားများတွင်ညဥ့်ကိုဆက်သွယ်ဒီဇင်ဘာလ 1, နောက်ဆုံးသောအချိန်လခြမ်းနီထံမှ 02.00 နာရီအတွင်းရွှေ့ဖို့ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုညမှာပင်တူရကီက Metro အတွက်လခြမ်းနီ, အပါတိတ်Çayyoluဦးတည်ချက်များနှင့်နောက်ဆုံးသောကာလ 02.00 နာရီစေမည်။ 01.00 အတွက်ကျန်းကနေမြေအောက်ရထား, ပါတိတ်နာရီ, 01.30 နာရီပါတိတ်Çayyoluနှင့်လခြမ်းနီအနေဖြင့် ...
အစ္စတန်ဘူလ်ညက Metro လိုင်း
အစ္စတန်ဘူလ်ညက Metro အချိန်ဇယား
ညဥ့်က Metro အချိန်ဇယား
Tarifez ညက Metro လေဆိပ်စွပ်စွဲချက်
Konya YHT ဘူတာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းနယူး Service ကိုဖွင့်လှစ်
ထိုအခါမှပယ်ဖျက်ခွင့်လက်မှတ်မြောက်ပိုင်းတိုင်း Marmara ကားလမ်းပြီးစီး Quarry ပါလိမ့်မယ်
အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပခံရဖို့ Marmara မြို့ပြဖိုရမ် 01-03 2019 အောက်တိုဘာလ,
လေး Kolor Asfaltlanıyထက် Akdeniz
မတော်တဆမှု Led ယာဉ်အသွားအလာအချက်ပြစနစ်ဆန့်ကျင်တာရှုမွို့
သင့်လျော်သော TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Bilecik အတွက်ကျန်ရစ်သူမိသားစုများရန်၎င်း၏ဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို
rayhab 20.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
2019 Teknofest အတွက် IMM စမတ်စီးတီးစီမံကိန်းများ
'' တူရကီစက်ဘီးလာကြ '' မြို့တော်ကို Izmir အတွက်ရှေ့ဆောင်စီမံကိန်းကိုခဲ့သည်
CHP Kocaeli လက်ထောက်သွင်းကြောင့်ရထားစီးပွားရေးကိုသွားမသွားပါစေနိုင်ပါတယ်
တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ် YHT ခရီးသည် Arifiye အတွက်သောင်တင်ခဲ့ကြ
အခကြေးငွေနာရီ Antalya ဓါတ်ရထား, လမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်ဇယား 2019
Marmaray ခရီးသွားလက်မှတ်စနစ်, ထို Marmaray Marmaray ဘူတာနှင့်လေဆိပ်စွပ်စွဲချက်
Metro အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ညတောင်တက်စတင်! .. ကောင်းပြီလုံခြုံရေးပေးခံရစေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? Register လုပ်နည်း .. ညမြေအောက်အခကြေးငွေ? ..
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အတ္တအီလက်ထရောနစ် Transit လက်မှတ်ခများစုစည်းမှု, Track ယာဉ်ခြေရာကောက်ကင်မရာနှင့် 10 တစ်နှစ်နူးညံ့နှင့်အတူစနစ်၏စမတ် Stop စနစ်စီမံကိန်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု
1-တစ်နှစ်တာဝါကျရန်, ပန်ကာရန် turnstile İzbeပျက်စီးခြင်းမဆပ်အခကြေးငွေ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (375) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
orient Express ကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်